COVID-19 အခြေအနေအတွင်း အောင်မြင်တဲ့ Career ရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? #2 ကောင်းသောအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ | Mycanvas
COVID-19 အခြေအနေအတွင်း အောင်မြင်တဲ့ Career ရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? #2 ကောင်းသောအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ
COVD-19 အခြေအနေကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်လူတို့သည်လက်ရှိတည်ရှိနေသောလမ်းကိုအပျက်သဘောဆောင်ပြီးကျဉ်းမြောင်းသောစိတ်ထားရှိသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အမြင်ကျဉ်းတဲ့လူတွေဟာ လက်ရှိတည်နေထိုင်နေရတဲ့နည်းလမ်းတွေကို မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုအခြေအနေမှာသင့်လျော်စွာစီမံနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတစ်ပါတ်မှာတော့ မသေချာမရေရာတဲ့အခြေအနေမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမဟာဗျူဟာဖန်တီးခြင်းအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းတို့သည်မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Problem #2 ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူး
Solution #2 ကောင်းသောအနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ Solution #1 တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအဆိုးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင် သင်တစ်ခါမျှမကြုံတွေ့ဖူးတဲ့စိတ်ကူးများနဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုမြင်ယောင်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ပုံစံခွက်ကိုချိုးဖောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာတခြားအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ တစ်ခါမှအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးတွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့သင်ယူဆပါက အဲ့ဒီ့ယူဆချက်ကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အချို့သောအတွေအခေါ်များကို သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရန်ခက်ခဲနေပါက အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်ထားပါ။ သင် COVID-19 အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အလုပ်အခြေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါသလဲ? အဲ့လိုအချိန်မှာ သင့်ရဲ့ဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုပါသလဲ?
သင့်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ Generation က ဘယ်အချိန်တုန်းကလဲ? သင်လူတွေအတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးပြုခဲ့လဲဆိုတာမျိုးတွေ သင့်စိတ်ထဲမှာ Highlight အနေနဲ့ပြန်စိတ်ကူးကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – လူတို့အားတစ်ခုခုပြောရန်ပြောလျှင် ပညာရေးနယ်ပယ်နှင့်သင်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။
သင့်အတွက်တန်ဖိုးက ဘာလဲ? သင့်အားလပ်ချိန်တွေမှာသင်ဘာလုပ်လေ့ရှိသလဲ? ဥပမာ – သင်စာရေးတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် သင့် Career အတွက် စာရေးဆရာ၊ Editor အလုပ်အကိုင်တွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပါ။
ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ COVID-19 အခြေအနေမှာ သင့်ရဲ့ Career ကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် သင်ဘာတွေလုပ်လေ့ရှိသလဲ?